सुदुर दैनिक संवाददाता २०७७, १७ असार बुधबार ११:२७ 1120 जनाले पढ़िसके
कुनै पुरुषले महिलाको योनिमा वीर्य स्ख’लन गरेपछि स्खलित वीर्य तथा योनि रस बिस्तारै बाहिर आउँछ, यो स्व’भाविक हो । यसरी वीर्य योनिबाट वाहिर निस्कनुले पर्याप्त मात्रामा वीर्य स्ख’लन भएको कुरालाई सं’केत गर्छ । हामीले हालै विवाह गरेका हौं । म (२३) र श्रीमान् (२७) बीच नियमितजस्तो सम्पर्क हुने गरेको छ । हामीबीच हुने सम्पर्कमा म प्राय:जसो म उ’त्तानो परेर टाङ फा’टेर रहन्छु भने श्रीमान् त्यसको बीचमा माथी बसेर सम्पर्क राख्नुहुन्छ ।
यसरी सम्पर्क राख्दा श्रीमान्ले झा’रेको वीर्य केही वेरमै मेरो यो’निवाट बगेर त’न्नामा जान्छ । यस्तो अवस्थामा वीर्य बाहिर जान नदिने कुनै उपाय वा आ’सन छ कि ? यही कारण मेरो गर्भ नरहने हो कि भन्ने ड’रसमेत लाग्छ ।वीर्य किन बाहिर निस्किएको ?
पुरुषले चरमसुख पाउने हाराहारीमा लि’ङ्गबाट एक प्रकारको सेतो तरल पदार्थ निस्कन्छ जसलाई हामी वीर्य भन्छौं । यही वीर्यमा शु’क्रकीट हुन्छ । एकपटक वीर्य स्ख’लन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिलिलिटर (५ मिलिलिटर भन्नाले १ चिया चम्चाजति) वीर्य निस्कन्छ । वीर्यमा हुने शुक्र’कीटको संख्या संधै एकैनासको नहुन सक्छ ।
शु’क्रकीटको संख्या ४ देखि १२ करोड प्रति मिलिलिटरसम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । हामीले देख्ने वीर्यको सानो अं’शमात्र शुक्रकीटले ओगटेको हुन्छ । वीर्यमा शुक्रकीटको मात्रा यस्तै २ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । कुनै पुरुषले महिलाको यो’निमा वीर्य स्खलन गरेपछि स्ख’लित वीर्य तथा योनि रस बिस्तारै बाहिर आउँछ, यो स्व’भाविक हो । यसरी वीर्य यो’निबाट बाहिर निस्कनुले पर्याप्त मात्रामा वीर्य स्ख’लन भएको कुरालाई संकेत गर्छ ।
तपाईंको यौ’न आ’सनमा पनि कुनै स’मस्या छैन । त्यसैले तपार्इंले चाहेसम्म यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तपाई वा तपाईंको श्रीमान्लाई तन्नामा वीर्य लाग्दा अ’सजिलो लाग्छ भने यौन सम्पर्कपछि कुनै कपडाले पुछ्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले अ’न्डरवेयरभित्र लगाइने सानो स्या’निटरी प्याड वा लाइनर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ ।
के यही कारणले सन्तान नभएको हो ? यसरी वीर्य वाहिर निस्कँदा कतै गर्भ नरहने हो कि भन्ने चि’न्ता धेरैमा पाइन्छ । तपाईलाई थाहै होला, डिम्ब निषेचन हुँदा वीर्यमा भएका करोडौं शु’क्रकीटमध्ये एक शुक्रकीटको मात्र डि’म्बसँग मिलन हुन्छ । यदि वीर्यको स्ख’लन योनिको भित्री भागमा भएको छ भने जति नै धेरै मात्रामा वीर्य बाहिर निस्किएजस्तो लागे पनि पाठेघरको मुख सम्म पर्याप्त शु’क्रकीट पुग्छन् । सामान्यत: यसरी वीर्य वाहिर निस्कनु गर्भधारण नहुनुको कारण बन्दैन ।
गर्भ किन नरहेको ? सन्तान जन्माउन ग’र्भधारण हुनुपर्छ । ग’र्भधारणका लागि शारीरिक सम्पर्क, वीर्यस्ख’लन, डिम्ब निष्कासन, डिम्ब निषे’चन अनि डि’म्बरोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ । सफल ग’र्भधारणका लागि नि’षेचित भू्रण वि’कसित हुँदै सन्तानका रूपमा जन्मन्छ ।
सन्तान जन्माउने यी सबै कुराको बीचमा तालमेल हुनुपर्छ । सन्तान जन्माउन नसक्नुका केही कारण पुरुषमा हुन्छ भने केही कारण महिलामा हुन्छन् । त्यसैगरी केही कारण दुवै जनामा संयुक्त रूपमा हुन्छन् । करिब १० प्रतिशतजति यस्ता घ’टनामा स’न्तानहीनताको कारण नै पत्ता लाग्दैन । तपार्इंले हालै मात्र विवाह भएको कुरा भन्नुभएको छ । हुन त एकमात्र शारीरिक सम्पर्कमा पनि ग’र्भधारण हुनसक्छ तर प्राय:जसो यस्तो हुँदैन ।
कुनै ग’र्भ नि’रोधको सा’धनबिना एक वर्षसम्म गर्भका लागि प्रयास गर्दा पनि गर्भ रहेन भने मात्र गर्भ रहने कुरामा स’मस्या छ कि भनेर परीक्षण गराउनुपर्छ । यदि विवाह भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन भने अहिले नै गर्भ रहेन भनेर चिन्ता गर्ने समय आइसकेको छैन कि ?